iPhone နှင့်အတူရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံများ၏ပထဝီအနေအထားကိုမည်သို့ရပ်ဆိုင်းမလဲ အိုင်ဖုန်းသတင်း
ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများရိုက်ရန်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသည့်အခါစမတ်ဖုန်းများကအမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်ကြီးမားသောကောင်းကျိုးများတစ်ခုမှာ၎င်းတို့ပြုလုပ်ထားသည့်တည်နေရာ၏ GPS သြဒီနိတ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ခရီးစဉ်တွင်စိတ်ကူးရွေးချယ်စရာနှင့် ဓာတ်ပုံတွေဘယ်မှာရောက်နေပြီဆိုတာသိချင်တယ်။
iOS အတွင်းမှသာ activate လုပ်သောဒီ option သည်ဓာတ်ပုံများကိုသူတို့၏တည်နေရာနှင့်အညီစီစဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခရီးစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိမည့်အချိန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှမည့်ဓာတ်ပုံ၏တည်နေရာကိုဝေမျှရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်မဝင်စားပါ။ ဤကိစ္စတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာကင်မရာနှင့်ပထဝီဝင်နေရာချထားခြင်းကိုပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Third-party application များကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်မပြုဘဲနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာ၏တည်နေရာကိုပိတ်ထားပါကထိုအခိုက်အတန့်မှကျွန်ုပ်တို့ရိုက်လိုက်သောဓာတ်ပုံအားလုံးတွင် GPS ကိုသြဒီနိတ်များမပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းတို့အားမြေပုံပေါ်တွင်အလွယ်တကူနေရာချထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဓာတ်ပုံများ၏တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပိတ်ထားခြင်းသည်တိကျသောအချိန်များအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့ဘယ်အချိန်မှာကျနော်တို့ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့သတိရရပေမည် အတင်းအဓမ္မ အဲဒါကိုပိတ်ထားရန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောရွေးချယ်မှုအားလုံးကို privacy option များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းရမည့်မီနူးတွင်ရနိုင်သည် ဆက်တင်များ> သီးသန့်တည်ရှိမှု.
သီးသန့်တည်ရှိမှုအပိုင်းအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သွားပါ တည်နေရာ, တည်နေရာကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်သောစက်ပစ္စည်း၏ applications များသို့မဟုတ်ဒြပ်စင်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, ငါတို့ option ကိုသွားပါ ကင်မရာ.
ကင်မရာအပလီကေးရှင်းမှကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်မှုများတွင် - ဘယ်တော့မှနှင့် app ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ, မူရင်းရှေးခယျြသော option ကို။ ကင်မရာကိုအသုံးပြုနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့တည်နေရာ၏ GPS ကိုသြဒီနိတ်များကိုမသိမ်းဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ Nape (option) ကိုပြောင်းလဲရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iPhone နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ယူသောဓာတ်ပုံများ၏ပထဝီအနေအထားကိုမည်သို့ပိတ်သိမ်းနိုင်သည်
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ရန် Toyota သည် CarPlay ကိုလက်မှတ်ထိုးသည်
LXORY Signature သည် AirPower - Dual Qi Charger ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်